Imandarmedia.com.np: कस्तो प्रकारको योनिले बढी यौन सन्तुस्टी मिल्छ ? थाहा पाउनुहोस…
Health Lifestyle, Lifestyle » कस्तो प्रकारको योनिले बढी यौन सन्तुस्टी मिल्छ ? थाहा पाउनुहोस…
कस्तो प्रकारको योनिले बढी यौन सन्तुस्टी मिल्छ ? थाहा पाउनुहोस…
मानिस अनुसार उसको लिङ्ग वा योनिको नाप र आकारमा धेरै भिन्नता हुने गर्दछ ।
कामसूत्रका लेखक ऋषि वात्सायनले पनि नापलाई आधार बनाएर लिङ्ग तथा योनिको वर्गीकरण गरेका छन् । उनले लिङ्गको नापअनुसार खरायो, वृष (साँढे) तथा अश्व (घोडा) र योनिको गहिराइअनुसार मृगी, घोडी र हस्तिनी गरेर तीन-तीन वर्गमा विभाजित गरेका छन् ।
बात्सायनका अनुसार खरायो पुरुषको मृगी, साँढेको घोडी तथा घोडाको हस्तिनीसगको मिलन समान अर्थात ‘समरत’ मानिन्छ । त्यसबाहेकका अन्य यौनसम्पर्कलाई ‘विषमरत’ भनिन्छ । विषमरतमा पनि पुरुषको लिङ्गको नाप नारी योनिको भन्दा ठूलो भएको स्थितिमा ‘उच्चरत’ भनिन्छ भने सानो भए ‘नीचरत’ ।
सामान्यतः उत्तेजित अवस्थामा लिंगको लम्बाइ यस्तै ५ दशमलव ९ -धेरैजसोको ५ दशमलव २५ देखि ६ दशमलव २५) इन्चको हुन्छ । योनि मांसपेशीले बनेको एकदमै लचिलो वा भनौं तन्कन सक्ने गुण भएको नली आकारको अङ्ग हो, जसको सामान्यतः लम्बाइ ३ देखि ४ इन्च हुन्छ ।